> Resource > Samsung > Samsung Video Editor: Sida loo Edit Samsung Video ku saabsan PC
Diiwaan kala duwan videos by qalabka Samsung oo aad oo aad doonayso inaad wax badan la polish daro? Waa hagaag, in halka Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) tallaabooyinka ku. Tani waxay awood leh Samsung video editor kaa caawin kartaa inaad si fudud u jar, isku shaandheyn, dalagga, midowdo files qaabab kala duwan, iyo sidoo kale iyaga oo la shakhsiyeeyo text hodan, filter iyo kala guurka. Waxaa intaa dheer, markii ay ku dhameysteen kaalinta Samsung video tafatirka, aad si toos ah u wadaagi karaan abuurkiinna on YouTube, gubi in DVD ama badbaadin qaabab kale oo kala duwan. Ma doonaysaa in ay isku day ah? Just Raac tallaabooyinka hoose si aad u aragto sida ay u xaalkaa Samsung video on PC. Ka hor inta aanay is bilaabay, marka hore waxaad kala soo bixi kartaa.
1 dejinta Your Samsung Video
Marka aad qabtid Video Edited lagu rakibay, aad diyaar u tahay in ay bilaabaan sixiddiisa aad video Samsung. Haddii aadan hore laga keeno files video aad kombuutarka, hubi in aad Samsung xidhmaan kombiyuutarka. Markaas ordi barnaamijkan oo guji "Import" si aad u ogaato meesha aad video caasimadii iyo waxa ay sii kordhineysaa in ay Item Warbaahinta.
2 shakhsiyeeyo Your Samsung Video
Jiid jeedi doorashada ka Item Media ka soo galaan waqtiga. Markaas waxaad shakhsiyeeyo kartaa video Samsung. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah hawlaha aasaasiga ah ee tafatirka Video Editor:
Goo, isku shaandheyn, dalagga, gooyay aad video boos kasta
Dheellitir dhalaalka, bedelkeeda, xawaaraha ciyaareed, mugga audio iyo garoonka
Ku dar iyo edit soo jeeda music ama record iyo dar voiceover
Dooro iyo codsan 300 cabsi badan kala guurka, koobab iyo saamaynta
Agtooda hawlaha aasaasiga ah, taas Samsung video editor sidoo kale ah "Power Tools" window si aad u abuuraan usii-wareeg, humaag, fool-off, boodi dhimaysa saamayn, taas oo ka dhigaysa in aad video ka sii artful. Waa maxay dheeraad ah, waxaad si fudud u tagi karaan goobaha kala duwan ee ka mid jir inaad u sheegto threads dheeraad ah iyadoo la isticmaalayo waqtiga PIP ah.
3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo dhoofin Samsung Edited ku Video
Riix ah "Play" icon ku eegaan aad video furmo Falanqeynta dhinaca midig. Haddii wax walba waa OK, guji "Abuur" inay u dhoofiyaan video ah saxar. Video Editor Kuu ogolaanayaa inaad dhoofin aad filim cusub oo ah qaabab badan oo kala duwan. Waxaad dooran kartaa qaab ku habboon sida baahidaada. Markaas magaca videos iyo doortaan jidkaa wax soo saarka, ka dhacay "Abuur" si ay u bilaabaan videos badbaadiyo. Haddii aad rabto in aad ka ciyaari video ku saabsan aaladaha kale sida iPod taabto, iPad, Zune, ECT, tag "Device" tab iyo dooran ka mid ah liiska. Dabcan, sidoo kale si toos ah aad la wadaagto kartaa video via YouTube ama DVD gubi in u ciyaaro on TV guriga.
Video Editor Download: Best Video ayeey Software